Myat Shu - 2011 October
You are here : Myat Shu » Archives for October 2011
Published By Myat Shu On Monday, October 31st 2011. Under ၀တ္ထု, တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု
ကျွန်မ ခွေးစကား ပြောမလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ များပြားလှတဲ့ ခွေးအုပ်ကြီးနဲ့အတူ “ခွေးသရဲ” ဆိုတာ မကြာသေးမီကပဲ အမှန်တကယ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပါ။ ……………………….. ကျွန်မတို့ တိုက် (၄) မှာ ခွေးငယ်ကလေးတွေ များလှပေမယ့်၊ ကလေးငယ်လေးတွေကတော့ နည်းပါတယ်။ အခန်းပေါင်း နှစ်ဆယ့်လေးခန်း ရှိတဲ့ တစ်တိုက်လုံးမှာမှ ငါးယောက်ပဲ ရှိတယ်။ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးသုံးယောက်။ အသက်အကြီးဆုံးက ငါးနှစ်ပဲ ရှိဦးမယ်။ အသက်အငယ်ဆုံးက သုံးနှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။ မောင်စွမ်းပြည့်တဲ့။ မောင်ရှင်းသန့်တဲ့၊ မြတ်ပန်းပွင့်သော်တဲ့၊ မဒေးတဲ့၊ ခန့်ခန့်တဲ့။ ဒီဟာလေး ငါးယောက်ထဲက အသက်အကြီးဆုံး သုံးယောက်ဟာ ကလေးမြေးငယ် မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အခန်းမှာ အမြဲ စတည်းချတတ်တယ်။ ... Continue Reading
မျက်ရှု ဖတ်ရတာ တန်ရဲ့လား
Published By Myat Shu On Monday, October 31st 2011. Under မျက်ရှု, နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရစကား
ဘာလိုလိုနှင့် တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ စခဲ့သည်က အပျော်တမ်းရေးသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုအဖြစ်သာ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့သည့် “မျက်ရှု” အခုတော့ အခါလည်ပြီတဲ့။ အစားကောင်းစားရတော့ ခင်မင်သူများကို သတိရတတ်သလိုပင် “မျက်ရှု” သည်လည်း မိမိတို့ ဖတ်ရှုရသည့်စာများ၊ မှတ်သားရသည်များ၊ တွေ့ကြုံရသည်များ၊ ပြောပြချင်သည်များကို အွန်လိုင်းချစ်သူများအား ချို၊ ချဉ်၊ ဖန်၊ ခါး၊ စိမ့်၊ စပ် မျိုးစုံသော အရသာဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။ ထိုစိတ်ဆန္ဒသည် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များထက် ပိုမို ပြင်းထန်ပါသည်။ ရည်ရွယ်သည်ကတော့ ပြည်တွင်းမှ ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ ဖြစ်စေ အွန်လိုင်းစာဖတ်ပရိသတ်များ မြန်မာရသစာပေနှင့် မကင်းကွာစေရန်လည်း တကြောင်းပါဝင်သည်။ မြန်မာစာပေကို မည်သို့မည်ပုံ မြှင့်တင်မည်၊ ကယ်တင်မည်ဟူ၍ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, October 29th 2011. Under မျက်ရှု, သတင်းတိုများ
နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် သက်တမ်းရှိ ၀န်ကြီးများရုံး အပါအ၀င် ၀န်ကြီးရုံးများ၊ ခြောက်ထပ်ရုံး၊ စစ်ရုံးချုပ် စသည်တို့ကို ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများအား ဟိုတယ်ပုံစံ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားအဖွဲ့ (MTB) ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်ရွှေက ပြောသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရသည်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့သလိုမျိုး၊ သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာခင်ရွှေက ဆိုသည်။ ၀န်ကြီးများရုံး အပါအ၀င် ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများအား ဟိုတယ်ပုံစံ လုပ်ကိုင်မည့် အစီအစဉ်အား လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရန် ကန့်ကွက်မှုများ ပြည်သူအကြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတကြီးက ယခုလို တားဆီးမိန့် ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ “သမ္မတကြီးက ပြည်သူ့အသံကို နားစွင့်ပါတယ်။ ... Continue Reading
အမရပူရမှ အစာအဆိပ်သင့်မှု အဖြေတွေ့ပြီ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ် ပွဲတော်ရပ်ကွက်မှာ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူပွဲမှာ အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ကနဦး သတင်းများအရ ဝေဒနာခံစားရသူ ၃၀၀ မှ ၄၀၀ ၀န်းကျင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူများထံ မေးမြန်းခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ၁၈၂ ဦးသာရှိကြောင်း သိရပြီး အစာအဆိပ်သင့်မှု၏ အဖြေကို တွေ့ရှိပြီဟု ဆိုသည်။ မန္တလေး ဆေးရုံ၊ ကလေးအထူးကုဆေးရုံနဲ့ အမရပူရမြို့နယ် ဆေးရုံတွေမှာ ကုသနေတဲ့ လူနာတွေကို ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့ နတ်သုဒ္ဒါ၊ ကြက်သားဟင်း၊ ပုစွန်ခြောက်ကြော်၊ ရေခဲမုန့်စတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးကြည့်တော့ ကြက်သားဟင်းနဲ့ ပုစွန်ခြောက်ကြော်မှာ အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်စေတဲ့ Staphylococcus Aureus ပိုး ... Continue Reading
တောင်သာနယ်ရှိ မြေပဲခင်းများတွင် ကြွက်အန္တရာယ် ရှိနေဆဲ
တောင်သာမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေပဲအဓိက စိုက်ပျိုးကြသော ယာမြေများတွင် ကြွက်အန္တရယ် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဒေသမှ တောင်သူများက ဆိုသည်။ “မြေပဲခင်းနဲ့ ကြွက်ဆိုတာ ရှေးကတည်းက ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုလောက် မဆိုးရွားဘူး။ အခုဟာက ယာခင်းရိုးမှာ ထန်းပင်တန်းတွေ စိုက်လာကြမှ ကြွက်က ပိုပေါလာတာ။ တချို့ကတော့ မြွေတွေကို ဖမ်းကြလို့ ကြွက်တွေ ပေါလာတာလို့ ပြောတယ်။ ကြွက်ကိုလည်း ဖမ်းကြတာပဲ။ ဒီမှာက ကြွက်နက် (မြေအောင်းကြွက်) နဲ့ ကြွက်ဝမ်းပူ (ဖြူ)မှာ ကြွက်ဝမ်းပူက ပိုများလာတာ။ ကြွက်နက်ကို တူရွင်းနဲ့တူး၊ ခွေးနဲ့လိုက်လို့ ရပေမယ့် ကြွက်ဝမ်းပူက ထန်းပင်တွေပေါ်မှာ အသိုက်ဖွဲ့ပြီး နေတော့ ပိုများတာပေါ့။ လူတိုင်းက ထန်းပင်မှ မတက်တတ်တာ။ “ညရောက်မှ ကြွက်ကထွက်တယ်။ ကြွက်ဆိုးတာ ... Continue Reading
မန္တလေး (ပုသိမ်ကြီး)မှာ ဟိုတယ်ဇုံလျာထားမှုကြောင့် အိမ်၊ မြေ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားနေ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မြေဈေးကွက်မှာ ဟိုတယ်ဇုံ စီမံကိန်းလျာထားမှုကြောင့် ရောင်းသူဝယ်သူများ ရှိလာပြီး ဈေးမြင့်လာကြောင်း သိရသည်။ “နန်းရှေ့လမ်းမ ၁၉ လမ်းပေါ် အဆုပ်အထူးကုဆေးရုံနဲ့ ထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကြား မဲကင်းကုန်း ရပ်ကွက်မှာ မြေကွက်တွေ နှစ်ဆကျော် ဈေးမြင့်သွားတယ်။ ဟိုတယ်ဇုံ လျာထားသတ်မှတ်တဲ့အထဲ ပါပါတယ်။ မန္တလေး - မိုးကုတ်လမ်း အနောက်ဖက် အောင်ချမ်းသာရွာ မြောက်ဘက်က ပေါက်မြိုင်မှာလည်း ဟိုတယ်ဇုံ လျာထားလို့ ဈေးတက်ပြီး အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်နေတယ်။ ဧရာဝတီနဲ့ အနောက်ဖက်က မင်းကွန်းဘက်၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးကြီးက View Point အနေနဲ့ ရှုခင်းကောင်းတယ်။ ပုသိမ်ကြီးနယ်က မြေဈေးကွက်က မနှစ်ကထက် ၀ယ်သူများလာသလို ဈေးလည်း နှစ်ဆတက်တယ် ” ဟု ပုသိမ်ကြီး ... Continue Reading
ရောဂါပိုးပါသော နွားနို့အား သဘာဝအတိုင်း သောက်သုံးသဖြင့် တီဘီရောဂါနှင့် သားလျှောခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ
ရောဂါးပိုးရှိသော နွားမှ ညှစ်ယူသည့် နွားနို့အား သဘာဝအတိုင်း သောက်သုံးသောကြောင့် လူသို့ ကူးစက်သော တီဘီရောဂါ၊ သားလျှောခြင်းများ ဖြစ်ပွားမှုရှိကြောင်း နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ဆေးပညာရှင်များထံမှ သိရှိရသည်။ “နို့စားနွား မွေးမြူတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မိမိမွေးမြူထားတဲ့ နွားတွေကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု မကြာခဏ ပြုလုပ်သင့်တယ်။ တစ်လောက ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမှာ တီဘီရောဂါရှိတဲ့ နို့စားနွားမက ညှစ်တဲ့ နွားနို့ကို သောက်မိလို့ တီဘီရောဂါ ကူးစက်မှု ဖြစ်သေးတယ်။ စစ်ဆေးကြည့်တော့မှ နွားနို့ကနေတဆင့် ဖြစ်တာ သွားတွေ့တယ်” ဟု ကောင်းကင်ပြာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းမှ တာဝန်ကျဆရာမ ဒေါ်ချိုချိုက ပြောသည်။ နွားနို့သောက်သုံးကြသူများမှာ အဟာရပြည့်ဝစေရန် ရည်ရွယ်၍ နွားနို့များကို ကျိုချက်၍ မသောက်ဘဲ၊ သဘာဝအတိုင်း ... Continue Reading
အပိန်နှင့် အပဲ့တို့၏ သမိုင်း
Published By Myat Shu On Monday, October 24th 2011. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
ဦးကြီး ဦးဘတူ မျက်မှောင်ကြီးကုတ်ထားတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်တော့ တစ်စုံတစ်ခု အလိုမကျဖြစ်နေပြီဆိုသည်ကို မောင်ကိတ် ချက်ချင်းသိလိုက်သည်။ သူ့ဦးကြီးက အငြိမ်းစားယူထားပြီ ဖြစ်သော်လည်း တစ်သက်လုံး ကျောင်းဆရာလုပ်လာသူဆိုတော့ တွေ့သည့်လူတိုင်းကို သူ့တပည့်ဟု ထင်နေတတ်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ စိတ်တိုင်းမကျလျှင် မကျသလို၊ အမြင်မတော်လျှင်လည်း မတော်သလို အချိန်အခါ နေရာမရွေး လူမရွေးဘဲ ဆူတတ်၊ ပူတတ်၊ အော်တတ်၊ ငေါက်တတ်သူဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း ဘာမှမဆိုင်သော ဘေးလူကိုပါ အဖျားခတ်တတ်သေးသည် “နှုတ်ခမ်းလည်း မကွဲ သွားလည်း မကျဲ လျှာလည်းမပြဲဘဲနဲ့ မြန်မာစကားကို မြန်မာက ဘာလို့ ပီအောင် မပြောနိုင်ရတာလဲကွ… ဟေ… ” ဦးကြီး၏အသံက ဟိန်းထွက်လာတော့ မောင်ကိတ် ခြေလှမ်းတုံ့သွားသည်။ အိမ်ထဲမ၀င်တော့ဘဲ အသာလေး လှည့်ပြန်ရရင် ... Continue Reading
ဘဏ်အားလုံး အွန်လိုင်းဖုန်းဘီလ်ဆောင်စနစ် ချိတ်ဆက်ပြီးလျှင် Postpaid စနစ် ငွေသွင်းကောင်တာ ဖျက်သိမ်းမည်
Published By Myat Shu On Sunday, October 23rd 2011. Under သတင်းတိုများ
ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရဘဏ်များ အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များအားလုံးနှင့် အွန်လိုင်း ဖုန်းဘီလ်ဆောင်သည့် စနစ်ကို ချိတ်ဆက်ကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီးပါက ယခုလက်ရှိ Postpaid စနစ်ဖြင့် ငွေသွင်းနေသော ကောင်တာများအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ သိရှိရသည်။ Postpaid ဖုန်းများအတွက် အွန်လိုင်း ဖုန်းဘီလ်ဆောင်သည့် စနစ်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ AGB ဘဏ်နှင့် ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ ရတနာပုံဝဘ်ပေါ်လ်တယ်တွင် စတင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် စတင်အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် အနေဖြင့် အွန်လိုင်းဖုန်းဘီလ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ကာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြုလုပ်လိုသူများကိုပါ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ကာ ... Continue Reading